Mik နဲ့ Bow တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း‌ကပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် မင်းသားချော Alek နဲ့ Bow ရဲ့ ပတ်သက်မှုကို ပရိသတ်များက စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း Mik နဲ့ Alek ကို နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုကာ ပရိသတ်တွေကြား အချေအတင်ဖြစ်ကြတဲ့အပေါ် Bow ဟာ မကြာသေးခင်က အင်တာဗျူးမှာပဲ သတိပေးအကြုံပြုသွားခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အတွက် Promotion လုပ်တဲ့အနေနဲ့ Bow ဟာ ပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုပွဲမှာပဲ အချစ်ရေးအကြောင်းကို ပြောဆိုကြရင်း ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပါ ထိန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ဖြေဆိုခဲ့သမျှကို အကျဉ်းချုံ့ဖော်ပြရရင် Bow က “Alek နဲ့ အတူရှိရင် ရှက်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ ပုံမှန်ပါပဲ။ လူတွေကလည်း ကျွန်မတို့ကို သိပ်ပြီး အာရုံရှိပုံမပေါ်ဘူး။
လုပ်စရာရှိတာလုပ်နေကြတာပေါ့။ ပရိသတ်တွေက Alek နဲ့ပတ်သက်မှုကို အာရုံစိုက်ပြီး စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်တော့ မျှော်လင့်မထားကြပါနဲ့။ ကျွန်မတို့က သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းသိအောင် အပြန်အလှန်စကားပြောဖြစ်ကြတုန်းပဲရှိသေးတာပါ။ သမီးရည်းစားဖြစ်ဖို့က အကြောင်းသိဖို့လုပ်ရတာ ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲလေ။
တအားကြီး အလျှင်မလိုကြပါနဲ့ဦး။ အစ်ကိုနဲ့ ညီမ လို မိတ်ဆွေအဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ စကားတွေပြောဖြစ်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပါပဲ။ အတူတူသွားလို့ အဆင်ပြေမယ့်နေရာလေးတွေဆိုရင်တော့ Alek နဲ့ သွားဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော Mik နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးတွေ ရှိနေတယ်။ မပြောပါနဲ့လို့လည်း ထိန်းချုပ်ထားလို့မရပြန်ဘူးလေ။
သူတို့ကြိုက်တာပြောတာဟာ သူတို့ရဲ့အ‌ခွင့်အရေးဆိုပေမဲ့လည်း နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ ဘယ်သူက ပိုချောလဲ? ပိုသင့်တော်လဲ.. စသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ်တစ်ခုခုမရေးခင် အရင်ဆုံး ‌စဉ်းစားစေချင်တယ်။ Mik နဲ့ Alek (၂) ယောက်စလုံးက သူ့နည်းနဲ့သူ ချောပြီးသား..ခန့်ညားပြီးသားပါ။ ဘယ်သူက ပိုသာတယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ဥပဒေဆိုတာရှိတာမို့လို့ တအားကြီးပြောဆိုရေးသားတာမျိုး ဂရုစိုက်ကြပါ။
အခုချိန်က လူတိုင်းခက်ခဲနေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ တရားစွဲတာမျိုးတွေလည်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ အဲ့တော့ အပြောအဆို ဂရုစိုက်ကြပါ” ဆိုပြီး ဦးစွာ အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ Mik ရေးတင်ခဲ့တဲ့ “တအားကို ပျင်းတာပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာနေရင်းက ဘာမှမပြောဘူးဆိုတာဟာ ငါ ဘာမှမခံစားရဘူးလို့ ဆိုလိုတာမှမဟုတ်ဘဲ” လို့ ရေးသားတင်ခဲ့ခြင်းကို Bow ရဲ့ အမြင်ကိုမေးတဲ့အခါ “တကယ်တော့ ကျွန်မမှာ ပြောစရာစကားမရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒါက ဘာကိုပြောလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်တာပဲ။ ကျွန်မကတော့ သိပ်ပြီး အာရုံမရှိပါဘူး။ သူ့ကိစ္စဖြစ်လို့ သူဘာတွေတွေးပြီး ရေးတင်သလဲဆိုတာ ကျွန်မဘယ်သိမှာလဲ? ဇာတ်လမ်းထဲကဟာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်မှုစေတဲ့အရာတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေကို လက်မလွှတ်မိပါစေနဲ့” ဆိုပြီး ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတော့တယ်။ Bow ကတော့ သူမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူ ရှေ့ဆက်ဖြတ်သန်းနေပါပြီ။
Next မင်မင်တို့ အလည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခု (သို့) ဆိုလ်းမြို့ရဲ့ Permission to Dance Pop up Store လေး »
Previous « “Snow Drop”Drama အတွက် Jisoo ဘယ်လို စိတ်နှစ်ပြီး ကြိုးစားရိုက်ကူးထားသလဲဆိုရင်
ချစ်မိသွားခဲ့ရင် ပေါ့ပျက်ပျက်မဟုတ်ဘဲ လေးနက်စွာချစ်သွားမယ်, လို့ဆိုတဲ့ အရှင့်သား JunHo
Online ဒေတာများအရ မိတ်ကပ်မပါဘဲတောင် အလှဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မင်းသမီးချော (၅) ယောက်